Dabalamuun Gibiraa Oromiyaa maratti mormii kaase. - OMN
Dabalamuun Gibiraa Oromiyaa maratti mormii kaase.
(Gibira, Oromiyaa, Ado. 11, 2017) – Kutaalee Oromiyaa keessatti mootummaan wayyaanee kaffaltii gibiraa daldaltootaa irratti baay’isuun hojii isaanii gufachisatti akka jiru daldaltoonni kutaalee oromiyaa garaagaraa irraa dubbisne OMN’f himan.
Oromoon diinagdeen guddachuun sirnicha fonqoolchee keessatti yaaddoo fi qormaata biroo waan ta’eef mootummaan wayyaanee gocha kana raawwachatti jira yaadni jedhanis Oromiyaa irraa dhaggahamaatti jiru
Sochiin warraaqsa Saba Oromoo Oromiyaa keessatti akkan jabaate itti fufuun isaa, mootummaa wayyaaneef yaadoo jabduu akka ture fi jiru tahu isaa eenyuun keenyayyuu waan arga fi taajjabaatti jirudha.
Sochiin warraaqsa saba Oromoo, biyyaa keessa fi biyyoota alaatti jabaachuun immoo, sirna bulchiinsa mootummaa wayyaaneef, kufaatii fi qormaataa jabduu tahun kan saaffisasatti jiru keessa isa angafaadha.
Mootummaan akkan raafamaa guddaa keessa galudhaan guyyaa kufaatii sirna isa lakka’aatti jiru immoo tooftaa ittiin umurii bulchiinsa isa dheereffatu tilmaamuun,uummata jabaa biyyitti burjajjessuun dirqaamaa jiruu fi jireenyaa sirnoota abbaa irree dhufe darba seenaa impaayeeraa biyyittiti.
Yaadonni karaalee garagaraa xinxaltoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummadhaan ibsamatti turan fi jiran immoo, Oromoon diinagdeen jabaachuun sirnicha aangoorra fonqoolchuu keessatti gahe guddaa kan taphaatu fi gumaachu akka tahe kan agarsiisanidha.
Oromoon yoo diinagdeen jabaaate, diinaa qe’ee isa irraa isa buqqisa fi dhiphisaatti jiru ofirraa fonqoolchuuf rasaasaas tahe meeshaalee waraanaa bittachuun isaa waan oolu miti, hojii dippiloomaasii biyyoota ollaa fi fagoo keessatti raawwachuufis diinagdeen hedduu murteessa fi shora ol’aanaa kan qabu tahun wal nama hin gaafachisu.
Yaaddoo akkan jabduu; qormaata guddoo akkas, ulfaataa fi yaadessaa tahun sirnicha irratti wal guruudhaan hudhe qabe irraa bayyannachufis tahe; injifaachuuf mootummaan wayyaanees, tooftaalee garaagaraatti dhimma baha, kan jiru fi ture tahun isaas ni yaadatamaa, rgaaleenis kanuma mirkanneessu.
Tooftaalee mootummaan wayyaanee sochii warraaqsa saba Oromoo gufachisuuf taasise keessa taarkanfiiwwaan gurguddoon, hidhaa fi ajjeechaa, yoomiyyuu sammuu ilmaan Oromoo fi seenaa qabsoo sabni oromoo taasisa jiru keessatti kan hin dagatamnedha.
Mootummaan sabicharratti taarkaanfiwwaan sukkanneessa akkas fudhachuun sochii jiran irraa duubatti deebisu kan dadhabe tahu kan himan maddeen odeeffannoo keenyaa oromiyaa irraa,rafamaa diinagdee wayita mormiin gaggeeffamaatti ture fi jiru humnoota waraanaa keesummaa immoo kanneen akka agaazii baasatti ture bakka buusachuuf uummata irraatti saamicha raawwachuuf tattaffachatti jira jechuun dubbatan.
Qorumsaa diinagdee, kufaatii sirnicha mudaates uummata guddaa biyyitti kan tahan saba oromoo kanaan keeessa bahuf wayita carraqaatti jirus taajjabna, guddinni diinagdee dijiitii lama biyyittiin galmeessa jirti jedhamuun inni afarfamatti tures erga miidiyaadhaan dhaggahamee ji’oonni darbun waggaan lakkoofsiisuuf jiru kunis taajjjabbii namoota diinagdee qoratan fi xinxalaan ti.
Mootummaan tibba kana raafamaa diinagdee hamaa keessa galudhaan kaffaltii gibiraa humna olii daldaltoota irratti dabaludhaan daldaltonni kutaalee Oromiyaa keessatti komii isaanii dhaggeessisatti jiru.
Daldalaan godina shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa dubbisnes,dhimma kaffaltii gibiraa humna olii gaafatamuun isaanii birattiis, yeroo amma gaaffii fi komii guddoo kaasuudhaan, waajjiirri abbaa taayitaa gaaliwwaan magaalaa isaanii lakkoofsa baayyina namoota komii dhiyeeffataniin uwwifamtee jiraachushee dubbatan.
Haaluma wal fakkaatuun, daldaltoonni godina hararghee bahaa aanaa meettaa magaalaa calanqoo keessattis;komii isaanii bifa hiriiraa mormiidhaan bal’inaan dhaggeessisatti akka oolan maddeen odeeffannoo keenya magaalaa calanqoo irraa OMNtti himaniru.
Dhimma mormii magaalaa calanqoo keessa gaggeeffamee hordofudhaan, mormii kana irratt qooda kan fudhatan daldaltooota qofa osoo hin taane, dargaggoonni akkasumaas jiraattoonni magaalittis qooda fudhachu isaaniitti kan OMNtti himan.
Mootummaan wayyaaanee kufaatii diinagdee isa mudaate irraa ooludhaaf kaffaltiin gibiraa nuu gaafachaatti jiru sirrii miti kan jedhanis daldaltoota godina shawaa kibbaa lixaa magaalaa walisoo irraa dubbisnedha.
Daldalaan addaatti magaalaa kana irraa dubbisne akka OMN’f himanitti, aanaa isaanii keessatti immoo kan mudaate guyyaatti galiin kee hangam taha jechuun guyyaa gabaa yookiin immoo guyyaa maamiltoonni heddumminaan argaman ragaa fudhachuudhaan gara waggaatti jijiiiruudhaan galiin kee guyyaa hangas waan taheef qarshii hanga kana kaffaluu qabda jedhan tilmaamaatti jiru, kun immoo dogongora guddaa tahu bira darbe, mormii birooodhaaf nuu kakkasaatti jira jechuunis Komataniru.
Kaffaltiin gibiraa kun kan inni dabale kutaalee Oromiyaa keessa iddoo murtaa’e qofatti miti ,kutaalee Oromiyaa bal’oo keessatti tahu isa illee odeeffannoo arganneen mirkanneessu dandeenye jira.
Dhimmi murtoo yookiin tilmaamaa kaffaltii gibiraa kunis, ilmaan oromoo hojii daldala irratti bobba’aan sadarkaa garaagaraa irraa jiraani biratti mormii fi komii guddaa uume jira.
Sodaan mootummaa wayyaanee,Oromoon yoo daldala keessa galudhaa, seektara diinagdee biyyitti qabate sirna keenyaaf yaadoo guddaadha jedhan waan sodaataniif, gocha ilmaan Oromoo diinagdeen lamsheessuu akka tooftaa sirna isaanii aangoo irratti tiksutti illaala jiru jechuun kan xinxalatti jiran immoo hayyoota fi ogeessota diinagdeeti.
OMN: Muudama Aangoo Irratti (LIVE) Ebla 19, 2018
OMN:ODUU Ebla 19/2018
OMN: Oduu (EBLA 18,2018)
OMN: Oduu (Ad. 11, 2017)
Harargeetti daldaltoonni magaalaalee hedduu dabaluu Gibiraa mormuun dukkanasanii cufan.
OMN: Marii Dhimma Baqattootaa fi Petition 77239(German) irratti (APRIL 18, 2018). Flüchtlingssituation in Deutschland
OMN:ODUU Ebla 18, 2018
OMN: Dhumaatii Moyyaalee irrattti namoonni naannoo kanatti dhalataan maal jedhu? (EBLA 18, 2018)
OMN: Gabaasa Addaa. Rakkoo Oromoota Baalee (Ebla 18, 2018)
OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA EBLA 17, 2018
Gaaddisa Raabaa Doorii
OMN: GRD – Ajjeechaa Mooyyalee fi Haala Yeroo (LIVE) Ebla 17, 2018
OMN: የሞያሌ ዳግማዊ ጭፍጨፋና ወቅታዊ ጉዳዩች (LIVE) April 17, 2018